အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Airbag ပြောင်းလဲမည် China Manufacturers & Suppliers & Factory
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Airbag ပြောင်းလဲမည် - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 10 များအတွက်စုစုပေါင်း အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Airbag ပြောင်းလဲမည် ထုတ်ကုန်များ)
အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါးသည်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Airbag အာရုံခံအသုံးပြုခြင်း
အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါးသည်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Airbag အာရုံခံအသုံးပြုခြင်း Reciever: 1. ဗို့အား: AC / DC 24V 2. Power: 1.5W 3. Output မုဒ်: relay ကို (NO NC) 4. Load လက်ရှိ: 1A 5. တုံ့ပြန်မှုအချိန်: <0.3s 6. ထိန်းချုပ်ရေးအကွာအဝေး:> 15 သန်းနဲ့ ပေးပို့သူ: 1. ဘက်ထရီ: CR2032 2. ဘက်ထရီဘဝကို:> 1 နှစ် 3. transmit...
ကားဂိုဒေါင်အမြင့်မြန်နှုန်းလိမ်ကားဂိုဒေါင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Shutter တံခါး
ကားဂိုဒေါင်အမြင့်မြန်နှုန်းလိမ်ကားဂိုဒေါင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Shutter တံခါး လိမ်ခက်အစာရှောင်ခြင်းတံခါးများမှာလည်းခက်ခဲဘက်မှာပြတင်းပေါက်ရှပ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းလူမီနီယံအလွိုင်းအမြန်တံခါးများ, အဖြစ်လူသိများကြသည်။ ဒါဟာ Anti-ခိုးမှုနှင့်မြင့်မားသောအပူချိန် partition ကိုအတူသတ္တုအမြန်တံခါးသစ်တစ်ခုအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။...
ပြင်ပအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသတ္တု Rolling အပိုင်းအပေါ်မှငှက်မြင်ကွင်းကားဂိုဒေါင်တံခါး
လူမီနီယမ်အလွိုင်းအပေါ်မှငှက်မြင်ကွင်း Rolling စက်မှုတံခါးမွမ်းမံ အဆိုပါဈတံခါးကို pane ထဲကတစ်ဦးစီးရီးရေးစပ်ကားဂိုဒေါင်တံခါးကိုသည်, ပုဒ်တလျှောက်တွင်ဓာတ်လှေကားအဆင့်မြှင့် ndustrial ။ စတိုင်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းရိုးရှင်းပြီးချောမွေ့လိုင်းဒီဇိုင်းနှင့်အတူကိုသာယာသောခံစားချက်ပေးသည်။...
တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းလျှပ်စစ်လက်စွဲစာအုပ် Push ကို Button ကိုပြောင်းလဲမည်
Supply နိုင်ခြင်း: 6000 per month
တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်းလျှပ်စစ်လက်စွဲစာအုပ် Push ကို Botton ပြောင်းလဲမည် တွန်းအားပေးခလုတ်ကိုအကြောင်းအသေးစိတ် ဤသည်ထွက်ပေါက် switch ကိုခလုတ်ကပိုကြော့နှင့် fashionbale ကြည့်လုပ်ကို ABS ၏ဖန်ဆင်းထားသည်နှင့် built-in ဖြစ်ပါတယ်ညွှန်ပြချက်အလင်း။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်စသည်တို့ကိုအများပြည်သူဝင်ပေါက်တံခါးအများပြည်သူတံခါး, အိမ်, ရုံး,...
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း "Hongfa အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးခရုလူမီနီယမ်အမြင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြန်နှုန်းတံခါး" အသေးစိတ် parameter သည်ဖြစ်ပါသည် ကုန်ပစ္စည်းအမည်: အမြင့်မြန်နှုန်းခရုတံခါး တံခါးကို Frame ကပစ္စည်း: သံမဏိ တံခါးကို Panel ကိုအရောင်: Grey က တံခါးကို panel က: လူမီနီယမ်အမြှုပ်နှင့်အတူ စံ: အီး, က ISO, SGS...
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအလင်းကုလားကာ Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးအမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး
အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက "အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအလင်းကုလားကာ Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Intelligent High Speed တံခါး" သည်, ကြင်နာစွာအဆိုပါ belowing သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆေးပါ။ Drive ကိုစနစ်: 220V / 380V 50Hz IP55 ပါဝါ 0.55KW-6.5KW တံခါးကိုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်:...
Photocell အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Device ကို Rapid Roll PVC တံခါး
Photocell အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Device ကို Rapid Roll PVC တံခါးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်: နည်းပညာအမျိုးအစား: နည်းပညာဆိုင်ရာ Paramerers Useage: Wide အစားအစာဓာတုဗေဒအထည်အလိပ်အီလက်ထရွန်းနစ် supemarket အအေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, သိုလှောင်နှင့်အခြားသောနေရာများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Size:...
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Airbag လုံခြုံရေးမြန်လှုပ်ရှားမှုအထည်အလိပ်ကြိတ်စက်တံခါး
အစာရှောင်ခြင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Air ကိုအိတ်လုံခြုံရေးလှုပ်ရှားမှုစက်မှုအထည်အလိပ်ကြိတ်စက်တံခါး လေတိုက်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ: 1176pa မှတက်၏လေတိုက်နှုန်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဖွင့်ပွဲ & အနီးကပ်မြန်နှုန်း: 0.5-1.5m / s နဲ့ အရောင်ကုလားကာ: အနီရောင်, လိမ္မော်ရောင်, အဝါ, အစိမ်း, အပြာ, အနက်ရောင်, မီးခိုးရောင်, ပွင့်လင်း။...
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Airbag ပြောင်းလဲမည် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Airbag အာရုံခံ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး PVC မြန်တံခါး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးခရုတံခါး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Shutter တံခါး ပြင်ပအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဂိုဒေါင်တံခါး စက်မှုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတံခါးမွမ်းမံ overhead အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအဆင့်မြှင့်တံခါး